Madaxweynaha PL oo caawa xarunta PDRC ka jeedin khudbad ku saabsan marxalada Siyaasadeed ee Soomaaliya
Garoowe:-Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa caawa saacadu markay tahay 07:30 PM ka jeedin doona xarunta PDRC ee Garoowe khudbad uu kaga hadli doona marxalada Siyaasadeed ee dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan dorashooyinka dalka.
Kulanka Hadal jeedinta ee Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa la filayaa in uu kaga hadlo shirarkii wadatashi Qaran ee ka dhacay Dhuusamareeb 1,2,3 , Muqdisho iyo weliba magaalada Baydhabo oo dhamaantod looga hadlayey xal ka gaarida doorashada dalka Soomaaliya ee uu hareeyey khilaaf iyo is mari waa.
Hadal jeedinta caawa loo balansan yahay ee Madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni ayaa ku soo beegmaysa xili maanta warsaxaafeedd ka soo baxay maamulka Jubbaland ay ku xireen ka qayb galka shirka wadatshiga Qaran ee magaalada Muqdisho ilaa 5 qodob.
Dhinac kale magalada Muqdisho ayaa waxaa ku sugan maamulada Gal-Mudug. Hirshabeelle, iyo Koonfur Galbeed waxaan ay maanta shirar hordhac ah la leeyihiin Madaxweyne Farmaajo shirkaas oo ka socda xarunat Villa Soomaaliya.